Qiimaynta Webinar (Sebtember 14th, 2020) - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
September 10, 2020 Elisabeth Uncategorized
Qiimaynta Webinar (Sebtember 14th, 2020)
Qiimeyntu miyey ka baxsan tahay gurigaaga naafada ee caadiga ah? Ma umuuqataa shaqo aad u badan? Ma la yaabban tahay sababta barnaamijyada qaar ay uga raadsadaan aqoonsi barayaasha asaaggooda ah? Haddii mid ka mid ah kuwan la yaqaan, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad laxanka u dhigto Isniinta, Sebtember 14 markay Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, iyo Shareen Grogan ay ku siinayaan tusaalooyin faahfaahsan waxa ay ku qabtaan xarumahooda qorista. Calaamadee jadwalkaaga aagaaga waqtiga oo nagu soo biir!
11 AM Baasifig
12 PM Buurta
1 PM Dhexe
2 PM Bari
Dhammaan xubnaha IWCA waa lagu soo dhaweynayaa inay ku biiraan, markaa fadlan si xor ah u martiqaad asxaabtaada. Kani waa kal-fadhi iyo tag; haddii aad ka qayb geli karto oo keliya qayb ka mid ah webinar, weli waa lagugu soo dhaweynayaa inaad naga soo biirto. Webinar-ka ayaa lagu qaban doonaa Zoom. Fadlan la xiriir Molly Rentscher, Isku-duwaha Barnaamijka Isku-duwaha Barnaamijka 'MWTA Mentor Match', ee xiriirka Zoom: mrentscher@pacific.edu
Webinar: Ku dadaalida mahadnaqida Waqtiyada adag (Sebtember 30th, 2020)